Akanyanya Biology Mabhuku
Hildegarda, rakanyorwa naAnn Lise Marstrand-Jørgensen
Hildegarda hunhu hunotizivisa kune iyo mhute nzvimbo yengano. Chete ndipo panogona kungogara ngano dzevatsvene nevaroyi dzakagadzikana zvakafanana mumazuva edu. Nekuti nhasi chishamiso chekudzoreredza bofu chine hunyengeri hwakafanana nechitsinga chinokwanisa ...
Escombros, naFernando Vallejo
Zvese zvinokona kudonha. Kunyanya zvakadaro, hupenyu seumwe unodzivirira kuputika kunodzorwa kwezera. Uyezve kune marara, ayo ndangariro dzakakosha dzisina kuzombowanikwa munguva. Nekuti shure kwezvose, hapana ndangariro inochengeta kubata kana izwi ne ...
Iyo Isingafi Flame naStephen Crane naPaul Auster
Iyo Wild West, seyakafananidzwa nenyika yekuAmerica mukuumbwa, yakawedzera kufungidzira kwayo, madhiri ayo uye mafomu ayo kune nyika hombe yekusagadzikana uye zvitendero zvine chekuita nezvese zvinhu. Hazvina kubvira zvambofungidzirwa kuti chimwe chinhu chakakomba chingafungidzirwe kuti chingaumbwe munyika sezvazviri nhasi ...
Ndichitarisa kumashure, naJuan Gabriel Vásquez
Iko kune zvinopfuura chimwe chinhu chine njodzi pamusoro pekuchinja kwanhasi. Zvinenge zvese zvinotumirwa kune huchokwadi hwekutenda kweiye anotsigira uyo akanyarara, kunyangwe kunyarara kunobva mukunyarara, kubva mukuparadzwa kweanopokana. Saka mumwe anopera, akanyudzwa muhukuru, achigutsikana nekumutsa ...
Vakadzi vemweya wangu, we Isabel Allende
Kuziva nemoyo nzira inoenda kunobva kurudziro, Isabel Allende mubasa iri anoshanduka kuva existential gibberish yekukura apo isu tose tinodzokera kune izvo zvakagadzira kuzivikanwa kwedu. Chimwe chinhu chinondibata sechisikigo uye chakakodzera nguva, maererano nehurukuro ichangoburwa iyo ...
Ndangariro kurovedza, naAndrea Camilleri
Izvo zvinoda kuziva kuti mukushayikwa kwemunyori pabasa, chii chingave chiri chinyorwa chinokanganisa, chinoshamisira muhupenyu, chinoguma chave chiri chisingawanzo kune ngano dzevanyengeri mushure mekufa kwake. Asi zvakare nzira yakazara kune vanhuwo zvavo vangangodaro vasina kuverenga munyori uyo asiri nguva refu yapfuura akasiya nzvimbo ...